Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo oo saakay dagaal aad u xoogan ka dhacay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo oo saakay dagaal aad u xoogan ka dhacay
Wararkii ugu dambeeyay ee haatan laga helaayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya inay xaaladda magaaladaasi tahay mid aad u degan, inkastoo ay weli jirto xiisad colaadeed oo u dhaxeeysa ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa subaxnimadii maanta dagaal aad u culus oo muddo saacado ah socday ku dhexmaray galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxayna labadaasi dhinac dagaalka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay ku dhawaad 10 qof oo la sheegay inay isugu jiraan dad shacab ah iyo ciidanka labada dhinac ee dagaalamay, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan.
Sidoo kale, dhaq-dhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee ka jiray magaalada Gaalkacyo ayaa maanta u muuqda mid aad u yar, iyadoo ay jirto cabsi colaadeed oo hareeysay dadka ku nool magaaladaas.
Dhinaca kale, dagaalka maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa jabinaya heshiiska dhinaca qadka teleefanka ah ay maalintii shalay ku gaareen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug, kadib markii Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay Michael Keating oo heshiis nabadeed labadaasi dhinac kala dhex dhigay.
Heshiiska labada dhinac ayaa waxaa ka mid ahaa in lakala qaado meelaha ay isku hor-fadhiyaan ciidanka labada dhinac iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo waxyaabaha keenaya xiisadda colaadeed.
Ilaa iyo haatan ma jirto wax waan-waan oo haatan socota, iyadoo sidoo kale aysan jirin wax hadal ah oo ay soo kala saareen saraakiisha ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug, kaas oo ay kaga hadlayaan dagaalka maanta ka dhacay galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug